Sida Loogu Soo Galiyo Fiidiyow Instagram Tallaabooyin aad u tiro yar ▷ ➡️ Kuwa raaca ▷ ➡️
Sida fiidiyow loogu dhajiyo barta 'Instagram' dhowr tallaabo oo keliya
October 30, 2020 0 comments 623
Qoraalkan ku saabsan Sida fiidiyowga loogu soo raro Instagram, waxaan tusnaa aqristayaasheena siyaabaha kala duwan ee sida loo sameeyo, kaliya waa in la fuliyaa tilaabooyin fudud oo ficil ah oo kuu ogolaanaya inaad ku guuleysato shabakadan bulshada.
Sidee loo galiyaa fiidiyow barta 'Instagram'?
Instagram waxay noqotay mid ka mid ah shabakadaha bulshada ee ugu isticmaalka badan dad badan oo adduunka ku nool, iyo waqtiyadan casriga ah, mowduucyo kala duwan oo xiiso leh ayaa lagu faafiyaa shabakadda bulshada ee kor ku xusan, si loo soo jiito taageerayaal badan intii suurtagal ah. in ay ku leeyihiin madal la sheegay.
Instagram waxay siisaa aaladaha ugu fiican isticmaaleyaasheeda halkaas oo ay wax ka beddeli karaan oo ay ku dhigi karaan daabacado, sawirro iyo fiidiyowyo, iyo sidoo kale inay dadka ku calaamadeeyaan waxyaabaha dhijitaalka ah ee la daabacay, iyo faa'iidooyinka kale ee xiisaha leh ee lagu raaxeysan karo Instagram.
Talooyin ku saabsan fiidiyoowga loogu soo raro barta 'Instagram'
Kahor intaadan hawsha qaban, waa inaad ogaataa sida loogu duubo fiidiyow barta 'Instagram', Sidoo kale, waxaa muhiim ah in isticmaaluhu ogyahay dhinacyo gaar ah oo khuseeya oo ku lug leh geeddi-socodka xiisaha leh ee soo dejinta fiidiyowyada, taas oo ah mid aad u fudud oo wax ku ool ah in la fuliyo, tanna waxaa lagu gaaraa iyadoo la tixgelinayo dhinacyada soo socda:
Fiidiyowgu waa inuusan noqon mid aad u culus, maxaa yeelay barnaamijka Instagram ayaa aqbala. soo gelinta fiidiyowyo leh culeys aan ka badnayn 20 MB.
Fiidiyowgu waa inuusan ka badnaan 1 daqiiqo waqtiga.
Miisaanka iyo dhererka fiidiyowga waa in la yareeyaa.
Barnaamijkan wuxuu ku siinayaa ikhtiyaarro kala duwan oo kuu oggolaanaya inaad riixdo fiidiyow, si loo yareeyo culeyskiisa iyo muddada uu qaadan doono, halkaasoo ay tahay inaad doorato 60-ka ilbiriqsi ee aad rabto inaad ku daabacdo barta 'Instagram'
Fursadaha laga heli karo internetka waxaa ka mid ah Video Online - Beddela, waxaad ikhtiyaar u leedahay inaad doorato qaabka aad rabto inaad dhoofiso, iyo sidoo kale muddada fiidiyaha ah. Haddii ay dhacdo in la isku dayo in si toos ah loogu soo dhejiyo dhacdada, u oggolow inay dhacdo hal saac gudahood markii la duubayo.
Fiidiyow galiya barta Instagram
Mar alla markii aad haysato fiidiyowga buuxinaya qeexitaannada habboon, culeys ahaan iyo mudd ahaanba, waxaad u sii socotaa inaad u soo geliso astaanta 'Instagram', waxaana loo sameeyaa si la mid ah sida aad sawirrada u dejiso
Calaamadda + waa in la riixaa.
Xulo fiidiyowga aad rabto inaad soo dejiso.
Waxaa loo tafatiray si ay ugu ekaato indho qabasho.
Fiidiyowyada waxaa sidoo kale loo geyn karaa sheekooyin, mudo 24 saacadood ah, waxaa arki kara kuwa raacsan markii la qiyaaso waqtiga la qiyaasayna, daabicitaanku wuu baaba'aa. Xulashadan, waxaad ku soo jiidan kartaa kuwa raacsan badan, marka lagu daro, waxaad dalban kartaa miirayaal iyo saameyn kale oo gaar ah, kuwaas oo ku jira dhammaadka hoose ee xulashada sheekada.
Soo rar fiidiyowyo dheeri ah
Qeybtaan waxaan kugu tusi doonaa sida loo soo galiyo fiidiyow dheer instagram-ka, waxaan u sharaxnaa:
Waxaa jira codsiyo fududeynaya habka loo soo rogo fiidiyow dheer, oo lagu sameeyo iyada oo la kala googooyo kuwa aan kor ku soo sheegnay, oo loo sameeyo taxane fiidiyowyo gaagaaban oo soconaya ugu yaraan 15 ilbidhiqsi, iyo isku xigxiga ay leeyihiin, ayaa loo muujiyaa sida saxda ah ee farriinta loo muujiyey. inaad rabto inaad gaadho dadweynaha.
Ka sokow taasi waxay u oggolaaneysaa inay diyaariso qaabka wax soo saarka, iyadoo la dhigayo sawirro muuqaal muuqaal ah qaab fudud.
Suuqa dhexdiisa waxaa jira xulashooyin gaar ah oo bilaash ah oo taageera habka loo jarayo fiidiyowyada si loogu qaado muddada 15 ilbiriqsi, hoos, waxaan ku tilmaameynaa qaar ka mid ah barnaamijyada kaa caawin kara inaad howshan fuliso:
Sheekada Gooyaha: Xulashada kaliya ayaa loo heli karaa Android.
Kala Bixinta Sheekada: Waxaa loo heli karaa macruufka, waxay leedahay astaamo u kala qaybsan fiidiyowyo dhaadheer dhowr fiidiyow oo 15-ilbiriqsi ah, ixtiraam u sii wadista.
Fiidiyowyada ku soo deji iPhone
Si loo ogaado sida fiidiyowyada loogu soo raro barta Instagram On iPhone, codsi loo yaqaan 'InstaChooser' ayaa la heli karaa. Barnaamijkan wuxuu siinayaa suurtogalnimada in la doorto fiidiyowyada ku keydsan kaameradda aaladda mobilada ka dibna u soo dhoofisa Instagram.
Laakiin, ka hor intaan la rakibin, nidaam gaar ah oo loo yaqaan JAILBREAK waa in la fuliyaa, tanna waxaa loo isticmaalaa in looga saaro xaddidaadaha qaarkood ee ku saabsan iPhone. Codsigani wuxuu ku darayaa badhan si looga soo dejiyo fiidiyowyada taleefanka gacanta Instagram, waana mid ku ag yaal dhinaca midig ee shaashadda fiidiyaha Instagram. Ka dib markaad riixdo badhanka, daaqad ayaa kuu muuqata taas oo kuu oggolaanaysa inaad xulato sawirro ama fiidiyowyo ku keydsan qalabka moobiilka.
Codsiga InstaChooser wuxuu bixiyaa dhinacyo gaar ah, oo ay kujirto inaad awoodo inaad geliso fiidiyowyo dhowr ah isla waqti isku mid ah, markaa waa muhiim inaad maskaxda ku hayso waxyaabaha soo socda:
Doorashadan waa in aan loo isticmaalin in lagu soo dhejiyo sawirro, haddii ay dhacdo in Instagram ay joojiso shaqada.
Waa inaad hubisaa in fiidiyowgu soconayo 15 ilbidhiqsi, haddii kale Instagram-ka ayaa xirmi doona digniin la'aan, sidoo kale way dhici kartaa haddii aad isku daydo inaad soo dejiso fiidiyowyo badan isla waqtigaas.
Si aad u muujiso badhanka InstaChooser, waa inaad qasab ku xirtaa Instagram, ka dibna furo InstaChooser, ugu dambeyntiina, furo Instagram. Haddii ay dhacdo in tillaabooyinkan yaryar aan la qaadin, ma shaqeyn doonto.
App-ka 'InstaChooser' laguma heli karo bilaash, hase yeeshe wuxuu leeyahay qiime la awoodi karo oo lagu iibsado.
Haddii aad ka heshay qoraalkan mid xiiso leh, waxaan kugu martiqaadeynaa inaad aqriso maqaalkeena: Sida loo tafatiro sawirrada barta Instagram.
Fiidiyowyada soo galiya Android
Sida fiidiyow loogu soo raro barta 'Instagram' pc, iyo Android, si loo fuliyo howshan soo dejinta fiidiyowga waxaa lagu gaaraa gacanta, waxaan ku tusi doonaa hoosta tallaabooyinka:
Fur codsiga Instagram, xulo ikhtiyaarka lagu duubo fiidiyowga.
Hoos u dhig astaanta fiidiyowga, oo bilow duubista illaa 15 ilbidhiqsi oo duubitaan ah la dhammaystirayo.
Yaree codsiga Instagram.
Fur codsi kasta oo sahamisa faylka, tusaale ahaan wuxuu noqon karaa: Khabiirka Faylka.
Marka biraawsarku furmo, sii soco dariiqa soo socda: "SD Card / Android / data / com.instagram.android / files / videos".
Inaad ku jirto galka fiidiyowyada, waa inaad xaqiijisaa galka ugu dambeeya ee la abuuray. Tan waa in loo qoondeeya magac la mid ah "VID_20130623_165601_session_0", marka la fiirsanayo waxa ku jira, waa inuu lahaadaa 2 faylal fiidiyoow ah.
Waxaad arki kartaa in fiidiyowga la duubay uu labalaabmay oo mid kamida feylasha uu la muuqdo magac oo ay weheliso ereyga "tolmo", sida ku cad tusaalahan: "VID_20130623_165601-stitched.mp4". Magaca faylka waa in la guuriyaa, kuwani waxay u dhigmaan qaab gaar ah "VID_20130623_165601-tolmo", taas oo u dhiganta xogta multimedia ee nooca fiidiyaha.
Ka dib markaad raadiso galka meesha fiidiyowga aad rabto inaad ku dhejiso Instagram uu ku kaydsan yahay, waa inaad beddeshaa magaca nuqul ka.
Fiidiyowga hadda la beddelay waa in la guuriyo oo lagu dhajiyo galka fiidiyowga ee barnaamijka Instagram.
Yaree barowsarka faylka
Ugu dambeyntii, Instagram waa in la furaa, sida aad u aragto, fiidiyowga hadda la soo rogay ayaa u muuqda. Kaliya waa inaad ku sii socotaa habka tafatirka, dooro soo bandhigid soo bandhigid iyo ugu dambeyn, daabac.
Geliyaan Fiidiyowyo Toos ah
Sida loo soo galiyo fiidiyoowga YouTube-ka barta Instagram, oo nool, waxay tusineysaa waxyaabo badan, oo ay ku jiraan taas, isticmaalka fiidiyowyada tooska ah ee 'Instagram' ayaa ah ikhtiyaarka ugu fiican ee loo gudbiyo farriin cad oo fudud, iyo sidoo kale mid ka mid ah hababka ugu wanaagsan ee lagula macaamilo kuwa raacsan. Si kastaba ha noqotee, taxaddar waa in la qaadaa sida kuwa raacsan ee loogu yeero nacaybku ay inta badan galaan fiidiyowyo toos ah si ay u niyad jabiyaan qofka fiidiyowga samaynaya.
Xaqiiqda soo dejinta fiidiyowyada tooska ah waxay bixisaa faa iido weyn, maaddaama Instagram ay aqbashay soo dejinta fiidiyowga hal duubis, oo soconeysa ku dhowaad 1 saac, iyadoo laga fogaanaayo hannaanka soo degsashada codsiyada u oggolaanaya gelinta fiidiyowga inuu ahaado mid dheer oo culus.
Si aad si fiican u ogaatid sida fiidiyowga loogu soo rogo instagram, waxaan kugu martiqaadeynaa inaad daawato fiidiyowga soo socda ee macluumaadka ku saabsan:
1 Sidee loo galiyaa fiidiyow barta 'Instagram'?
1.1 Talooyin ku saabsan fiidiyoowga loogu soo raro barta 'Instagram'
1.2 Fiidiyow galiya barta Instagram
1.3 Soo rar fiidiyowyo dheeri ah
1.4 Fiidiyowyada ku soo deji iPhone
1.5 Fiidiyowyada soo galiya Android
1.6 Yaree barowsarka faylka
1.7 Geliyaan Fiidiyowyo Toos ah
Sida loo saxarro sawirrada barta 'Instagram' wixii ku habboon?
Sida loo qaado shaashadda shaashadda 'Instagram' iyaga oo aan ogayn?